Ungayitshintsha njani iphasiwedi kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayitshintsha njani iphasiwedi kwi-Twitter?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 303
Kwi-Twitter, ukhuseleko lweakhawunti yakho ngumba obaluleke kakhulu ekufuneka ulawule. Nawuphi na umsebenzi okrokrisayo onayo kwiakhawunti yakho unokunxulunyaniswa nokuphathwa ngabantu besithathu abangafanelekanga ukuba bafikelele kuyo, kwaye inokuba uyenza ngenjongo zokuziphatha gwenxa.
Ngakumbi nangakumbi iingxaki zokukhangela i-akhawunti zixeliwe, ke kuya kufuneka uqinise ukhuseleko lwakho ngeendlela ezahlukeneyo, ikakhulu, ukutshintsha rhoqo iphasiwedi yokufikelela. Ukwenza oku, qhubeka ufunda inqaku oza kulifumana apha ngezantsi.
Fumana indlela yokutshintsha iphasiwedi
Ukufumana indlela yokumisela iphasiwedi, landela indlela oyifumana apha:
Skrolela ezantsi kwicandelo lokuseta leakhawunti yakho ye-Twitter. Igama nendawo ekuyo eli candelo zinokutshintsha kuxhomekeke kwiqonga olisebenzisayo:
PC okanye iApp
Nje ukuba ungene kwiphepha lewebhu kwiPC, Kuya kufuneka uye kwicala lasekhohlo imenyu, kanye ecaleni kwexesha. Ezantsi kwale menyu kuya kufuneka ufumane iqhosha "ongakhetha kuzo". Ngokungena apha uya kukwazi ukufumana "iisetingi kunye nemfihlo".
Ukufikelela kwicandelo Uqwalaselo nemfihlo Kwi-App, kuya kufuneka ungene kwifoto yeprofayile. Emva kokuba ucinezele kuyo, itab iya kuvela kwicala lasekhohlo lesikrini.
Nje ukuba ungene kweli candelo, kufuneka ufake "iakhawunti yakho". Kweli candelo uyakufumana "utshintshe iphasiwedi". Phambi kokuba uqhubeke nokutshintsha igama eligqithisiweyo, kuya kufuneka wazi ukuba zonke iiseshoni zakho ziya kuvalwa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kwale uyisebenzisayo ukutshintsha iphasiwedi.
Uya kufumana iibhokisi ezininzi apho kuya kufuneka ubeke khona ipassword yangoku, kwaye iphasiwedi entsha kabini. Emva kokubeka lonke ulwazi oluceliwe liqonga ukwenza utshintsho, kuya kufuneka ucofe ku "gcina".
Ngezantsi kwebhokisi apho ubeka khona iphasiwedi yangoku, kukho ukhetho "Uyilibele iphasiwedi?
Kufuneka wenze ntoni ukuba uyilibele iphasiwedi?
Cofa kulo mbuzo, Nje ukuba uyifumane kwicandelo lokutshintsha iphasiwedi.
Inkqubo iya kukusa kunxibelelwano apho ungalutshintsha khona ulwimi kwi icon ye ulwimi phezulu. Uya kufumana Umbuzo ufuna ukuseta njani kwakhona iphasiwedi?
Ungakhetha phakathi "thumela ikhowudi ngomyalezo obhaliweyo kwinombolo yefowuni ephela ngo " kwaye uya kubona amanani amabini okugqibela enombolo oyibhalisileyo kwiakhawunti yakho. Olunye ukhetho luya kuba "ukuthumela i-imeyile" kwaye uya kufumana i-imeyile oyilungiselele kwiakhawunti yakho ebhalwe ngeeaster.
Kuyo nayiphi na indlela oyikhethayo, uya kufumana ikhowudi yokuqinisekisa ekufuneka uyibeke ebhokisini eya kuvela kwiscreen sesicelo. Nje ukuba yenziwe, inkqubo iya kukubonelela ngegama eligqithisiweyo.
Uya kufumana kwakhona ukhetho Awunakho ukufikelela kuzo? ukuqhubeka nokusebenzisa ezinye iindlela zokufumana kwakhona iphasiwedi, ukuba awunayo inombolo yakho yefowuni kunye ne-imeyile.
1 Fumana indlela yokutshintsha iphasiwedi
1.1 PC okanye iApp
2 Kufuneka wenze ntoni ukuba uyilibele iphasiwedi?
Ndingabhengeza njani nge-Instagram?